mety afaka 30 taona eo ho eo. Ireo no fototry ny toekareny saingy manao fandraharahana be any ivelany izy amin’izao fotoana izao ary sehatra maro no hidirany. Amin’izao fotoana izao dia novidian’ny mpandraharaha avy any Qatar avokoa ny ankamaroan’ny Hotely lehibe kintana 5 tahaka ny “Georges V” sy ny klioban’ny PSG any Frantsa hampiroboroboana ny sehatra fizahan-tany. Ankoatr’izay dia nividy tany fambolena sy fiompiana maro any Australie ihany koa izy ireo ary milofo amin’ny fanaovana fandraharahana ny amin’izany. Any Qatar rahateo moa maro tany efitra ka tsy mamokatra sakafo ary ny 80% n’ny sakafo dia afarana any ivelany avokoa. Rehefa novidian’izy ireo lafo ireo tany ireo dia alefa mivantana any aminy ny vokatra sy ny biby fihinana fiompy ao. Ankoatr’izay dia mampiasa vola be ihany koa i Qatar amin’ny sehatra fampianarana ary manana ny Oniversite voasokajy anatin’ireo tsara indrindra amin’izao fotoana izao. Tonga mampianatra any mihitsy ireo mpampianatra mahay avy amin’ny Oniversite Harvard Amerika, Oxford Anglisy sy ny any Frantsa koa. Efa mahazo mianatra ary tena amporisihina rahateo mihitsy moa ny vehivavy izay nananganan’ny vadin’ny printsy fikambanana Qatar Foundation. Mahakasika ny fanomanana ny fifaninana baolina kitra maneran-tany izay hotanterahina any an-toerana amin’ny 2022 dia efa maro be no orinasa natsangana mifototra amin’ny fanatontosana izany. Hatramin’izao dia mandray mpiasa sy manam-pahaizana avy any ivelany marobe izy ireo ary ny maro an’isa amin’ireny dia avy any India sy Philippine. Firenena manankarena i Qatar ary efa miditra amin’ny fitsinjovana ny ho avy rahatrizay ary tena tsara alain-tahaka ny fahaizany nampiasa sy nitrandraka ary nivarotra ny harena an-kibon’ny taniny izay nampiainga haingana ny toekareny.